विश्वकप क्रिकेटः सन्तुलन गुमाएको दक्षिण अफ्रिकाले रोक्ला त वेष्ट इन्डिजका गेललाई ? - VOICE OF NEPAL
विश्वकप क्रिकेटः सन्तुलन गुमाएको दक्षिण अफ्रिकाले रोक्ला त वेष्ट इन्डिजका गेललाई ?
२७ जेष्ठ २०७६, सोमबार ०८:५२
119 ??? ???????
विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगितामा आज वेष्ट इन्डिज र दक्षिण अफ्रिका विचको खेल हुँदैछ । दुई पटकको विश्वकपकाे ट्रफि उचालेको वेष्ट इन्डिजको सामना गर्न एक पटक पनि विश्वकप नजीतेको अभागी टीमको रुपमा मानिएको दक्षिण अफ्रिका तयार रहेको छ । यी दुई टीमकोखेल आज नेपाली समयअनुसार ३ बजेर १५ मिनेटमा खेल शुरु हुनेछ ।
दक्षिण अफ्रिकाले यो विश्वकपमा पहिलेका ३ खेलमा सन्तुलन गुमाएको छ । दक्षिण अफ्रिका पहिलो खेलमा इंग्ल्यान्डसँग १०४ र दोस्रो खेलमा बंगलादेशसँग २१ रनले पराजित भएको थियो । त्यस्तै भारत सँगको खेलमा ६ विकेटले पराजय वेहोरेको छ । आफ्ना तीन खेलमा पराजित हुँदै लय गुमाएको छ । आज वेष्ट इन्डिजसँगको खेलमा पनि दक्षिण अफ्रिका पराजित भएमा अफ्रिकाका लागि विश्वकप सेमिफाईनलको यात्रा लगभग समाप्त हुने छ ।
वेष्ट इन्डिज भने पहिलो खेलमा पाकिस्तानसँग जीत हात परे पनि अष्ट्रेलियसँगको खेल गुमाएको छ र लय गुमाउँदै गरेको दक्षिण अफ्रिकालाई हराएर आफु लयमा र्फकन चहान्छ ।
दक्षिण अफ्रिकासँग विश्वका उत्कृष्ट ब्याट्सम्यान र बलरहरु रहेका छन् तर तालमेल नमिल्नुको कारण विश्वकपमा दक्षिण अफ्रिकाको नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न सकेको छै ।
सन् १९७५ र १९७९ को विश्वकपको उपाधि उचाल्दै इतिहास बनाएको वेष्ट इन्डिज तेस्रो पटक विश्वकपको उपाधि चुम्ने दाउमा छ ।
दुवै टीमा म्याच वीनरहरुको कमी छैन वेष्ट इन्डिजमा क्रिस गेल अर्थात क्रिकेटका युनिभर्सल बोस छन् र अन्य पनि निकै राम्रा खेलाडीले भरिएको छ ।
कुनै पनि मैदानमा लामालामा छक्का लगाउन इन्डिका खेलाडीहरु माहिर छन् । दक्षिण अफ्रिकाको टाउको दुखाई पनि यहि वन्न सक्छ गेल, रसेल, होप, हिटमायर जस्ता खेलाडीहरुलाई छिटै आउट गर्न नसके स्कोरवोड ४०० को पार लागउन सक्ने क्षमता राख्दछन् ।